UMthethomusha ompetha base-KZN kowe-Danone Nations Cup | Eyethu News
Noon deadline looms for defiant Mugabe as Zimbabwe crisis deepens - 35 mins ago
Mugabe defies resignation expectations in TV speech – VIDEO - 37 mins ago
Bolt enlisted to improve “explosiveness” of Aussie running between the wickets - 40 mins ago
Kenya’s Supreme Court to issue election ruling - 43 mins ago
French police officer kills three before committing suicide - 44 mins ago
Isikole samabanga aphansi iMthethomusha saseMgungundlovu singompetha bebhola be- 2016 KwaZulu-Natal under-12 Danone Nations Cup kulandela ukunqoba kwabo ngemepelasonto esiphuma kuyo.
UMusa Memela, ongumqeqeshi, uthe i- KZN provincial final yaphikisana ngolaka. “ Izinga lebhola laliphezulu, kodwa kulindelekile uma sicabanga ukuthi bangaki abadlali abanekhono abaqhamuka kulesifundazwe,” kuchaza yena. Kwashaywa amagoli amaningi, okuyinto engajwayelekile kulemidlalo eyimizuzu engu- 20 ubude.
Ekugcineni, iMthethomusha idlale umdlalo ohlelekile, yadlala kahle enkundleni, yadlula kahle yakwazi nokushaya amagoli adingekayo. Ikhono labo lihlukile kanti bashaye namagoli angu- 22 kumqhudelwano wonke. “Sawina yonke yonke imidlalo yethu ezingeni lesifunda,” kusho uMemela, kanti sakwazi ukushaya esasibhekene nabo, isikole samabanga aphansi iMophela kowamanqamu wezifunda. Sahlulwa lulelozinga ngonyaka odlule, okwasho ukuthi ngeke sisafinyelela kowamanqamu wezifunda.”
Ngokuphumelela kwabo abadlali bakhona bazoya e Boksburg ngomhlaka 25 Juni kumncintiswano wamanqamu kazwelonke, lapho isikole esizophumelela kowamanqamu sizoya emidlalweni yamanqamu amazwe eFrance ngasekupheleni kwalonyaka.
UMemela wayeyingxenye yeqembu elincane kwi- Maritzburg United FC phakathi kuka- 2003 kanye no- 2009, kanti akakwazanga ukudlalela iqembu eliphezulu nokwenza wayeka ukudlala wasekhetha ukugxila ekuthuthukiseni intsha. Waqala iqembu lakhe lezingane ezineminyaka ephakathi kuka- 10 kanye no – 17 kanti eminyakeni emithathu edlule wacelwa izikole ukuba azisize. Ngaphandle kowamanqamu kazwelonke uMemela ukholelwa ekutheni kubalulekile ukudlulisa ukuthi abadlali bagxile kumsebenzi weqembu.
“Ngesikhathi sowamanqamu wezifundazwe, ikakhulukazi kwimidlalo esheshayo, abadlali bonke bafuna ukuba semehlweni omphakathi kanti bakhohlwe amagoli eqembu. Kwakumele ngibanike iongxenye yenkulumo ngaphambi komdlalo owandulela owamanqamu kanti baqhamuka sebedlala njengompetha.”
Manje, uzohlela njengeminye imidlalo yobungani yeqembu ngokushesha. Uzophinda ababeke namakilabhu ebhola asendaweni lapho izinga lebhola lezinyawo liphezulu. Bonke abafana baphinde badlalele ikilabhu yakhe, manje inendlela eningi yokungena kubona kanti bazozilolonga ndawonye lapho futhi.
Dinuphuzo Primary 0 vs Sipheni Primary 1
Ithaka Primary 0 vs Sindawonye Primary (red/white) 1
Sinaye Primary 2 vs Delihlazo Primary 1
Kasturba Gandhi School 6 vs Dumile Primary 0
Sipheni Primary 0 vs Ophuzane Primary 5
Sindawonye Primary 0 vs Zandile Primary 3
Delihlazo Primary 0 vs Mthethomusha Primary 3
Dumile Primary 0 vs Inkunzi Primary 3
Ophuzane Primary 4 vs Dinuphuzo Primary 0
Zandile Primary 1 vs Ithaka Primary 2
Mthethomusha Primary 1 vs Sinaye Primary 0
Inkunzi Primary 1(2) vs Kasturba Gandhi School 1(1)
Semifina1 1- Ophuzane 2 vs Inkunzi Primary 0
Semi-final 2 – Mthethomusha Primary 3 vs Zandile Primary 0
Final – Ophuzane Primary 1 vs Mthethomusha Primary 3
Kunqobe iMophela Primary koweDanone Nations